သူ့အပေါ် ပြန်လည်တုန့်ပြန် ခဲ့တဲ့ လူကာကူကို နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးနှက်သွားတဲ့ #ဂယ်ရီနဗီးလ် - SPORTS MYANMAR
သူ့အပေါ် ပြန်လည်တုန့်ပြန် ခဲ့တဲ့ လူကာကူကို နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးနှက်သွားတဲ့ #ဂယ်ရီနဗီးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နောက်ခံ ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် ဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ် လောက်က ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း လူကာကူ ကို ကိုယ် အလေးချိန် များ လွန်းသူ ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ရဲ့ လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ သွားပါ သေးတယ် ။
အဲ့ဒီ အတွက် ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း လူကာကူ ကလည်း နဗီးလ် အနေ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင် မှု အကြောင်း ပြောလို့ ရပေ မယ့် သူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်လား ဆိုတဲ့ အပေါ် မေးခွန်း ထုတ် စရာ အကြောင်း မရှိ ကြောင်း ၊ မလိုအပ် ကြောင်း ပြန်လည် တုန့်ပြန် ခဲ့ပါ သေးတယ် ။
အခုတော့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က လူမှု ကွန်ယက် ဖြစ်တဲ့ တွစ်တာ အပေါ် မှာ လူကာကူ ယူနိုက်တက် မှ ထွက်ခွာ သွားတဲ့ အတွက် ကြည်နူး ဝမ်းမြောက် မိကြောင်း ၊ ယူနိုက်တက် မှ ဘယ်လို ကစားသမား တွေကို ထွက်ခွာ စေလို သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် သူ့ အကြောင်း ကြားမိ ပါတယ် ။ သူ အသင်း က ထွက်ခွာ သွားတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ကြည်နူး မိ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူတို့ ကို သူတို့ အသင်း ထက် ပိုပြီး ကြီးကျယ် ကြတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ကစားသမား မျိုး ယူနိုက်တက် မှာ မြင်တွေ့ ရရင် မပျော်ရွှင်ရ ပါဘူး ။ အဲ့လို ကစားသမား မျိုး အသင်း မှာလည်း မရှိ စေချင် ပါဘူး ”
” သူ့ရဲ့ နိုင်ငံ့ အသင်း အနေအထား ၊ သူ ကစားသမား ကောင်း တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း တွေကို အထူး မပြောလို ပါဘူး ။ သူက အမြဲတမ်း ဂိုးတွေ သွင်းယူ နေဦး မှာပါ ” လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က လူမှု ကွန်ယက် ဖြစ်တဲ့ တွစ်တာ ပေါ်မှာ ရေးသား ဖော်ပြ သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် တွစ်တာ ပေါ်မှ ပရိသတ် တစ်ဦး က ‘ ဒီထက် ပိုပြီး ဘာတွေ မြင်တွေ့ လိုချင် နေတာ လဲ ဂယ်ရီ ရေ ။ တစ် ရာသီ 25 ဂိုးလောက် သွင်းယူ ပေး နိုင်တဲ့ ကစားသမား မျိုးလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် တစ်နှစ်လုံး နေမှ အများဆုံး 10 ဂိုးလောက် ပဲ သွင်းယူ ပေးနိုင် တဲ့ ကစားသမား မျိုးလား ? ‘ လို့ မေးမြန်း သွားတဲ့ အခါ နဗီးလ် က …
” ဒီ အခိုက် အတန့် တွေမှာ 25 – 10 –5ဆိုတဲ့ ဂဏန်း တွေ အကြောင်း ငါ စိတ် မဝင်စားဘူး ။ ငါတို့ တွေက အသင်း မှာ ကစား လို ကြတဲ့ ကစားသမား တွေကို ပဲ အလို ရှိနေ ကြတာ ပါ ။ မလိုအပ် တဲ့ ကစားသမား တွေကို ရောင်းထုတ် ပြီး လိုတဲ့ သူတွေ နဲ့ အသင်း ကို ပြန်လည် တည်ဆောက် ဖို့ အတွက် ပေါ့ ”
” ငါ လိုချင်တာ အဲ့တာ ပါပဲ ။ ဒီ အတွက် အချိန် တွေတော့ အနည်းငယ် ပေးရ မှာပါ ။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ရှည် ပေးနိုင် ဖို့ လိုအပ် လှ ပါတယ် ။ တွစ်တာ အပေါ် မှာတော့ စိတ်ရှည် တဲ့ သူတွေ များ ပါတယ် ။ အဲ့တာ တွေက ကောင်းမွန် တယ်လေ ” လို့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် က ပြန်လည် ဖြေကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
သူ့အပျေါ ပွနျလညျတုနျ့ပွနျ ခဲ့တဲ့ လူကာကူကို နောကျတဈကွိမျ ထိုးနှကျသှားတဲ့ #ဂယျရီနဗီးလျ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နောကျခံ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈတဲ့ ဂယျရီ နဗီးလျ ဟာ ပွီး ခဲ့တဲ့ တဈပါတျ လောကျက ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူး ဟောငျး လူကာကူ ကို ကိုယျ အလေးခြိနျ မြား လှနျးသူ ၊ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဆနျရဲ့ လား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး ထုတျခဲ့ သှားပါ သေးတယျ ။
အဲ့ဒီ အတှကျ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူး ဟောငျး လူကာကူ ကလညျး နဗီးလျ အနေ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကွံ့ခိုငျ မှု အကွောငျး ပွောလို့ ရပေ မယျ့ သူ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဆနျလား ဆိုတဲ့ အပျေါ မေးခှနျး ထုတျ စရာ အကွောငျး မရှိ ကွောငျး ၊ မလိုအပျ ကွောငျး ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျ ခဲ့ပါ သေးတယျ ။
အခုတော့ ဂယျရီ နဗီးလျ က လူမှု ကှနျယကျ ဖွဈတဲ့ တှဈတာ အပျေါ မှာ လူကာကူ ယူနိုကျတကျ မှ ထှကျခှာ သှားတဲ့ အတှကျ ကွညျနူး ဝမျးမွောကျ မိကွောငျး ၊ ယူနိုကျတကျ မှ ဘယျလို ကစားသမား တှကေို ထှကျခှာ စလေို သလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ကြှနျတျော သူ့ အကွောငျး ကွားမိ ပါတယျ ။ သူ အသငျး က ထှကျခှာ သှားတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော ကွညျနူး မိ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော ကတော့ သူတို့ ကို သူတို့ အသငျး ထကျ ပိုပွီး ကွီးကယျြ ကွတယျ ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ကစားသမား မြိုး ယူနိုကျတကျ မှာ မွငျတှေ့ ရရငျ မပြျောရှငျရ ပါဘူး ။ အဲ့လို ကစားသမား မြိုး အသငျး မှာလညျး မရှိ စခေငျြ ပါဘူး ”
” သူ့ရဲ့ နိုငျငံ့ အသငျး အနအေထား ၊ သူ ကစားသမား ကောငျး တဈယောကျ မဟုတျတဲ့ အကွောငျး တှကေို အထူး မပွောလို ပါဘူး ။ သူက အမွဲတမျး ဂိုးတှေ သှငျးယူ နဦေး မှာပါ ” လို့ ဂယျရီ နဗီးလျ က လူမှု ကှနျယကျ ဖွဈတဲ့ တှဈတာ ပျေါမှာ ရေးသား ဖျောပွ သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ တှဈတာ ပျေါမှ ပရိသတျ တဈဦး က ‘ ဒီထကျ ပိုပွီး ဘာတှေ မွငျတှေ့ လိုခငျြ နတော လဲ ဂယျရီ ရေ ။ တဈ ရာသီ 25 ဂိုးလောကျ သှငျးယူ ပေး နိုငျတဲ့ ကစားသမား မြိုးလား ၊ ဒါမှ မဟုတျ တဈနှဈလုံး နမှေ အမြားဆုံး 10 ဂိုးလောကျ ပဲ သှငျးယူ ပေးနိုငျ တဲ့ ကစားသမား မြိုးလား ? ‘ လို့ မေးမွနျး သှားတဲ့ အခါ နဗီးလျ က …
” ဒီ အခိုကျ အတနျ့ တှမှော 25 – 10 –5ဆိုတဲ့ ဂဏနျး တှေ အကွောငျး ငါ စိတျ မဝငျစားဘူး ။ ငါတို့ တှကေ အသငျး မှာ ကစား လို ကွတဲ့ ကစားသမား တှကေို ပဲ အလို ရှိနေ ကွတာ ပါ ။ မလိုအပျ တဲ့ ကစားသမား တှကေို ရောငျးထုတျ ပွီး လိုတဲ့ သူတှေ နဲ့ အသငျး ကို ပွနျလညျ တညျဆောကျ ဖို့ အတှကျ ပေါ့ ”
” ငါ လိုခငျြတာ အဲ့တာ ပါပဲ ။ ဒီ အတှကျ အခြိနျ တှတေော့ အနညျးငယျ ပေးရ မှာပါ ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျရှညျ ပေးနိုငျ ဖို့ လိုအပျ လှ ပါတယျ ။ တှဈတာ အပျေါ မှာတော့ စိတျရှညျ တဲ့ သူတှေ မြား ပါတယျ ။ အဲ့တာ တှကေ ကောငျးမှနျ တယျလေ ” လို့ ဂယျရီ နဗီးလျ က ပွနျလညျ ဖွကွေား သှားခဲ့ ပါတယျ ။